UNdunankulu ugxeka eyokuhlukunyezwa kwabesifazane | News24
UNdunankulu ugxeka eyokuhlukunyezwa kwabesifazane
Kungesikhathi UNkk Ngenzeni Majola(owesibili kusuka kwesobunxele) amukela itayitela lakhe kuNdunankulu wesifundazwe uMnu Sihle Zikalala.isithombe: lethiwe makhanya
UNDUNANKULU wesifundazwe sakwaZulu-Natali uMnu Sihle Zikalala usenxenxe abesifazane ukuba baphumele obala bakhulume uma ngabe behlukunyezwa.
UMnu Zikalala ukusho lokhu ngoLwesibili mhla zili-10 kuMandulo (September) ehholo lomphakathi waseMbali Unit 14 nalapho kade ezonikezela khona ngokusemthethweni amatayitela ezindlu emphakathini waka-Ward 17 kanye no-Ward 18 ngaphansi komasipala uMsunduzi.
UMnu Zikalala ubehambisana noMphathiswa wezokuHlaliswa kwaBantu uNkk Peggy Nkonyeni.
Kunikezelwe ngamatayitela angama-268 ku-Ward 17 kanye no-368 ku-Ward 18.
Ekhuluma namalunga omphakathi uMnu Zikalala unxuse ukuba umphakathi uwaphathe kahle amatayitela kanti futhi ungavumi ukuthi udlelwe izindlu zawo.
“Ukunikezelwa ngalamatayitela ingoba sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi umphakathi unezindawo zawo ngokusemthethweni. Ningathathi-ke amatayitela nihambe niyoboleka imali komashonisa bese nibambisa ngendlu. Baningi abathathelwa izindlu zabo ngomkhoshosho nina nize ningavumi. Akekho umuntu onemvume yokukuthathela indlu yakho ekubeni unetayitela.
“Lawa ngamatayitela okuqala ukuba anikezwe lemiphakathi. Akugcini lapho ngoba nakwezinye izindawo esisasalele emuva kuzona ezifana nendawo yase-France sizobanikezela nakhona ngamatayitela abo.Sifuna ukuthi abantu bakithi babe nezindawo abazozibiza ngezabo,,” kubeka yena.
UMnu Zikalala ube esekhala ngesihlava esibhekene nomphakathi sokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabantu besifazane.
Unxuse abantu besifazane ukuba bangafeli ngaphakathi uma ngabe behlukunyezwa.
“Sibhekene nobunzima bokuhlukunyezwa nokudlwengulwa kwabantu besifazane.
“Leli ihlazo ekumele sililungise. Uma ngabe umyeni wakho uyakushaya ekhaya khuluma ungafeli ngaphakathi. Ungathuli ngoba uthi umuntu owenza okubi uyena oletha okudla endlini.”
UNkk Nkonyeni uthe ukunikezela kwabo amatayitela emphakathini kungenye yezindlela zokubabuyisela isithunzi sabo.
“Uma ngabe ungenalo itayitela noma ubani angafika akutshele ukuthi indlu eyakhe.”
Omunye othole itayitela uNkk Buselaphi Mhlaba waka-Ward 17 eMbali Unit BB utshele i-Echo ukuthi kuyamjabulisa ukuba ekugcineni naye sekunento ephathekayo engubufakazi bokukuthi ngempela indawo ngeyakhe.
“Sengihlale iminyaka engaphezu kwengama-20 endlini ngaphandle kwetayitela. Nasebusuku sengizolala ngikhululeke ngazi kahle ukuthi nginamaphepha akhombisa ukuthi indawo eyami. Sengiyazi nokuthi izingane zami angeke zize zihlupheke,” kubeka yena.